Ogaden News Agency (ONA) – Madaxda Kenya & Soomaaliya oo Heshiis Cusub Isla Ogolaaday.
Madaxda Kenya & Soomaaliya oo Heshiis Cusub Isla Ogolaaday.
Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in la xoojiyo xidhiirka labada waddan iyo ka wada shaqaynta danaha labada waddan iyo guud ahaan Gobolka geeska Africa.
Labada madaxwayne waxey ku heshiiyeen in ay sii xoojiyaan, oo ay hir-geliyaanna heshiiskii iskaashi ee ay labada dal kala saxiixdeen bishii July ee sanadkii 2015kii, kaas oo xoogga saarayay dhinacyada amniga, ganacsiga, maalgashiga, duulimaadka, waxbarashada, beeraha, wadaagga aqoonta iyo horumarka, horumarinta xoolaha, kalluumeysiga, dalxiiska, socdaalka, shaqaalaha iyo caafimaadka.
Heshiiska ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in muddo laba todobaad gudahood ah ay bilowdaan duulimaadyada tooska ah ee Mugudisho iyo Nairobi, oo aaney diyaaraduhu sii mari doonin magaalada Wajeer halkaas oo aad loogu baadhi jiray diyaaradaha Somalia usocda ama kayimaada.
Waxaa kale oo ka mid ah in la furo xuduudaha labada waddan ee Dhobley iyo Liboyo, Baladxaawo iyo Mandhera si loo fududeeyo isu socodka iyo nolosha dadka labada wadan ee dariska ah.